Aogositra 9, 2018 Admin
Fitsarana Rosiana olana tsara voalohany indrindra ho an'ny cryptocurrency dokam-barotra
Fitsarana rosianina heverina ny famoahana Edinstvo Nizhnekamsk, izay Mivezivezy any amin'ny Repoblikan'i Tatarstan, mba ho banga ny dokam-barotra fitsipika. Ny raharaha amin'ny fitsarana amin'ny alalan'ny tonga ny Anti-Federal ampihimamba Service & sampana eo an-toerana ny subdivision Rosiana Banky Foibe.
Ny fanjakana voalaza fa ny dokambarotra ao amin'ny fanontaniana, izay fotsiny no nitondra ny hoe "fampiasam-bola amin'ny cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum, Zcash. Fivoriambe sy ny fanamboarana ny harena ankibon'ny tany toeram-piompiana "niaraka tamin'ny fifandraisana an-telefaonina maro, nihazakazaka mifanohitra amin'ny lalàna ara-dalàna. "Avy ny hevitry ny afa-po ny voalaza etsy ambony dokambarotra, manaraka ho azy ny Richard Timurovich Blumchen dia fanatitra tolotra ara-bola, ary tsy mila hevitra ireo,"Ny Anti-ampihimamba Service nitaraina, izay niafara tamin'ny olona mendrika ny ho handoa lamandy noho ny fandikan-dalàna. http://www.interfax.ru/russia/624465
Aostralia mba hahita ny herin'ny masoandro voalohany Powered Bitcoin harena ankibon'ny tany toeram-piompiana
Ny tahirin-kevitra foibe Australian mpandraharaha sy ny cryptocurrency fanampiny dia mivoatra izay mamaritra tahaka ny firenena voalohany "ambadiky ny Grid angona foibe" Powered by angovo azo havaozina. Toerana amin'ny fitrandrahana arintany-tanàna Collie, ny sasany 200km atsimon'i Perth, ny toerana vaovao no namboarina ny tahirin-kevitra DC foibe mpandraharaha roa sy ny sampan'ny D Coin ary ho Powered by iray masoandro toeram-pambolena.
Amin'ny vahoaka nanao "Manome vidiny ambany dia ambany namboarina fampiantranoana hoatr'izany safidy manokana ho an'ny cryptocurrency sy ny fitrandrahana Bitcoin amin'ny fifaninanana manerantany tahan'ny, DC roa & D Coin no afaka hanintona ny sain'ireo na ny an-toerana sy iraisam-pirenena ny fitrandrahana crypto fiaraha-monina… Tanteraka crypto harena ankibon'ny tany fanahafana, mampiasa ny fahefana 4MW voalohany Availability, ny tahirin-kevitra aho ho afaka foibe momba ny 650 BitCoins isan-annum sarobidy manodidina $6 tapitrisa miorina amin'ny harena ankibon'ny tany sy ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny fifanakalozana. "Efa voalahatra ho nanomboka Q1 2019.
GMO ny cryptocurrency raharaha Nahazo $ 2.3M tombony amin'ny Q2
Zavatra IT goavana GMO nitatitra nanao ny fandidiana tombony ny $2.3 cryptocurrency tapitrisa noho ny raharaham-barotra tany amin'ny 2 lafiny tamin'ity taona ity. Ny mafy ara-bola ny tatitra farany nanambara ny orinasa crypto ampahany natao $23 tapitrisa in harato vola miditra. Niteraka ny vola ao amin'ny crypto ampahany dia saika mitovy Nizara roa ny eo amin'ny harena ankibon'ny tany sy ny fifanakalozana orinasa.
koa, ny mafy Toa nampitombo ny harena ankibon'ny tany fahaiza-manao eo amin'ny lafiny 2. Ny orinasa vanja milevina 512 BitCoins eo amin'ny lafiny voalohany amin'ity taona ity, izay kely noho ny 528 BitCoins GMO vanja milevina tamin'ny volana Jona 2018 irery.
Intuit nandresy Bitcoin patanty ny fanodinana vola amin'ny hafatra an-tsoratra
California mifototra amin'ny raharaham-barotra & ara-bola ny orinasa rindrambaiko Intuit efa nahazo ny patanty ny fanodinana vola Bitcoin alalan'ny SMS. Ny fanamarinana antsipiriany ny fomba ny tontolo virtoaly kaonty afaka hanampy mpampiasa roa mba hamindra vola mampiasa finday. Ny orinasa nametraka voalohany ny patanty in 2014, fotoana fohy taorian'ny izany nanomboka ny QuickBooks Bitcoin vola fanompoana, ny raharaham-barotra Bitcoin processeur izay orinasa madinika afaka ampiasaina mba hanaiky Bitcoin in solon'ny ny Fiat vola.
Ny fankatoavana ny fandoavam-bola hafatra azo atao amin'ny fomba maro samy hafa, toy ny amin'ny alalan'ny “ny tenimiafina mifandray amin'ny fangatahana ny tantaran 'ny mpampiasa” mba fandraisana vola. Iray hafa koa mampiasa voicemail tahaka ny fankatoavana. Intuit Efa ela no mijery ny fanatsarana ny fidirana amin'ny fandoavam-bola Bitcoin processors. Na dia nanomboka QuickBooks in 2014, ny orinasa fampandrosoana ny fandoavam-bola foana sehatra, Vao haingana indrindra miara-miasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena Veem mba hahafahan'ny cryptocurrency fandoavam-bola.
$261M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Moa Bitcoin (BTC) Ready for Bul...
Tobi Clayton hoy i:
Aogositra 27, 2018 amin'ny 6:06 PM
Anton Zelinsky hoy i:
Oktobra 17, 2018 amin'ny 3:15 PM